Kubatanidzwa nomumwe PA380 VC with A350 batanidza rongedza, zvinoita?
mubvunzo Kubatanidzwa nomumwe PA380 VC with A350 batanidza rongedza, zvinoita?
2 Makore mashoma 4 apfuura #481 by JanneAir15
Mhoro! Ndakagara paIndaneti A350 batanidza rongedza uye ndinofunga kuti ndicho A350 yakanakisisa unokwanisa kuwana kuti FSX izvozvi asi pane imwe dambudziko guru nayo: ine angori A320 / A330 akaita nzvimbo yemutekenyi uye ndakafunga kuti zvinobvira kubatanidza munhu VC kubva Project Airbus A380 kuti ndege iyi. Ndicho chikonzero A380 VC nokuti ndiyo dzepedyo kuti ndinogona kuwana (nokuti hapana A350 VCs). Saka aigona imi kundibatsira iyi? Nechekare vakaedza dzimwe Tutorials asi pasina.
Heinoi A350 batanidza:
2 Makore mashoma 4 apfuura #484 by Gh0stRider203
Ndakaita kukurumidza Google Search sezvo Handina nokutendeseka kumbobvira aita ichi, uye vakwira vhidhiyo iyi. Ndinovimba zvinobatsira!
2 Makore mashoma 4 apfuura - 2 Makore mashoma 4 apfuura #485 by JanneAir15
Ndakatoiverenga vakatarisa kuti vhidhiyo uye vakaedza nzira asi hazvina kushanda. Ndicho chikonzero ndiri kukumbira pano.
Hongu Ndakasvika pakugumisa kuti hazviiti. Ini Akaongorora mafaira nezvose zvinodiwa asi hazvibviri kunyange vari MDLXMDLH iyo vhidhiyo inoti asi ndakazviedza zvose uye hapana mabasa saka Handitombozivi kuziva zvokuita. Asi kana munhu anogona kuita izvozvo kushanda ipapo ndapota udzai pano sei.
Kugadzirisa kwekupedzisira: 2 makore emavhiki 4 akapfuura ne JanneAir15.